Hoos u dhaca weyn ee lacagta inta lagu jiro xiisadda corona waxay horseedaa sicir barar: waa xalka bitcoin? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 13 May 2020	• 22 Comments
"Fiat money" ama "lacag aamin ah" waa lacag ka soo dhacda qiimaheeda oo aan ka aheyn sheyga laga sameeyay (sida dahabka iyo qalinka), laakiin kalsoonida laga qabo in loo isticmaali karo iibsashada alaabada iyo adeegyada. Sidaa darteed qiimahu kuma salaysna miisaaniyad gaar ah iyo waxa ka kooban birta qaaliga ah, laakiin waxay ku xidhan tahay kalsoonida in hawl-wadeennada dhaqaaluhu ay ku dhigaan qiimaha lacagta.
Meeshaad ku haysatay qadaadiicad dahab ama lacag ah waqti hore, qiimahaasi wuxuu la xiriiray sida dhakhsaha leh iyo inta dahabka ama qalinka ah ee lagu qodan karo. Markii la soo bandhigo lacagta waraaqaha, saxaafadda daabacan ayaa la shidi karaa. Iyada oo 'nambarrada kombiyuutarka' lacagta, heerka OPEC dollar iyo xiriirka ka dhexeeya soosaarka saliidda ay ahayd in ay bixiyaan caymis. Dhammaan heerarkaas waxaa lagu tuuray dusha sare intii lagu jiray qalalaasaha corona.
Bangiyada dhexe waxay daabacaan lacag aan xadidneyn. Waxay u sameeyaan tan sababtoo ah baahida loo qabo lacagta ayaa sii kordheysa. Sidee kale dowlad ahaan, maxaad u bixin kartaa dhammaan xirmooyinkan gargaarka ah oo aad dadka ugu shubayso lacag aad ku badbaadin karto?
Waa maxay sababta daboolida lacagta ay muhiim utahay?
Markii aad wali haysatay lacagta qadaadiicda ah iyo lacagta dahabka ah, baahida lacagtaas ayaa korodhay markii dadku sii korodho iyo marka ganacsigu kordho. Taasi micnaheedu waxay ahayd inaad haysato lacag badan si aad wax u iibsato. Waxaan iibsadaa badeecadaada anigoo ku siinaya tiro ka mid ah lacagta qadaadiicda ah oo qiimahoodu xadidan yahay. Waxaad ka iibsan kartaa waxaad uga baahan tahay qadaadiicdaas dahabiga ah.
Sababta oo ah waad ogayd wakhtigaas inay ahayd hawl hawl kadhis ah in lacag ama dahab laga soo saaro dhulka, waxaad sidoo kale ogaatay in qadaadiic dheeri ah lagu dari doono, laakiin in loo baahan yahay lacag badan oo qadaadiic ah macnaheedu maahan in lacagtaasi si lama filaan ah ugu soo muuqan doonto toddobaad gudihiis. ayaa qiimaheeda hoos u dhacay. Ka dib oo dhan, waxay qaadatay waqti iyo dadaal si ay uga soo saarto maaddadaas dhulka oo ay ugu milmaan qadaadiic. Markaa waxaad si amaan ah u haysan kartaa lacagtaada in aad wax ku iibsato usbuuca soo socda, adigoon ka baqaynin in qadaadiic dahab ah uu qiimahoodu kala badh yahay.
Markii lacagtaas culus lagu beddelay warqad warqad ah, aad ayey u fududaatay. Waraaqdu way fududahay in la daabaco. Taas awgeed, bangiyada dhexe waxay kaliya ku qasbanaadeen inay dusha saaraan saxaafadda. Taasi weli waxay qaadatay waqti iyo dadaal, laakiin durba way ka fududdahay. Waraaqdan ayaa sidaa darteed lala xiriiriyay macdanta dahabiga. Taasi waxay noqotay heerka dahabka. Tusaale ahaan, daabacaadda lacagta ayaa wali ku xidhan xawaaraha ay miinadu ku aasan karto dahabkeeda, markaa waad ka hortagtay hoos u dhac degdeg ah oo ku yimaada qiimaha.
Iyada oo baahida lacagtu kor u kacday sida dadka dunida iyo ganacsiguba u koreen, heerkan dahabiga ah ayaa laga tegay mar uun. Taasi waa sida loo aasaasay OPEC. Ururkan saliida wuxuu ku xirnaa wax soo saarka lacagta iyo soosaarka saliida. Markaa heshiisyada adduunka waxaa laga sameeyay xaddiga foosto oo saliid ah oo ay soo saari karaan waddammada. Doolarku wuxuu la xidhiidhay soosaarka saliida, markaa haddii aad rabto inaad daabacato doollar, waxaad kaliya samayn kartaa taas oo ku xidhan tirada saliida la soo buuxiyay.
Heerka saliida ayaa sidoo kale muddo dheer kadib la sii daayay haatana ma jiro wax caymis ah oo hadda jira. Waqtigan xaadirka ah, bangiyada dhexe ayaa sidaas darteed abuuraya 'lacag fiat'. Tan macnaheedu waa inaysan haysan wax xayiraad ah waxkastoo daabacan lacag sababta oo ah ma jiro wax dammaanad qaadaya oo ah inay tani la xiriirto xawaaraha dahabka ama saliida laga soo saari karo dhulka, hoos u dhaca lacagta lama xakameynayo. Waxaad kuheli kartaa qiimo dhimis lacageed 1 todobaad gudahood.
Waa maxay micnaha lacagta aan la ilaalin karin looga jeedo dhaqan ahaan?
Ficil ahaan, tan macnaheedu waa in lacagtu si dhakhso ah u xumaato. Boqolaal balaayiin doolar iyo yuuro ayaa la daabacay muddadii xiisadda Corona. Taasi micnaheedu waa doolarkaasi iyo lacagta euroda si sahlan ayey uga yar yihiin. Waqti dhow ama kadib, tani waxay saameyn ku yeelan doontaa qiimaha dukaamada.
Hadda bangiyada dhexe waxay la yimaadeen tabaha lagu daboolayo qiimo dhaca lacagta. Tusaale ahaan, haddii adiga oo ah shirkad caalami ah ay lacag ka soo amaahdeen bangi weyn, bangigaas weyn wuxuu ka amaahday bangiga dhexe. Bangiyada dhexe ayaa markaa daabacaya xitaa lacag intaas ka sii badan (sifiican, ma daabacaan, waxay kordhiyaan tirada nidaamyadooda kumbuyuutarrada) si ay dib ugala soo baxaan dammaanadaha deynta (bond, caddeynta deynta) ee ka imanaya barnaamijyadaas.
Markaa ka soo qaad shirkadu haysaa 100 milyan oo deyn ah. Haddii ECB ay hadda ka iibsato dammaanado deyn shirkadaas, markaa shirkaddaas runtii waxay heshay 100 milyan oo bilaash ah. Shirkaddaas waxay ka soo iibsan kartaa saamiyadeeda lacagta ama waxay ka iibsan kartaa kuwa ka dhacaya tartamada.
Sidan ayaad u xaqiijineysaa in dadweynuhu u maleynayaan in dhaqaaluhu uu weli yahay mid wanaagsan. Ficil ahaan, si kastaba ha noqotee, isla markiiba waxaad keentay 100 milyan oo qiimo dhimis lacageed ah. Hadda boqol milyan oo ka mid ah dhowr boqol oo bilyan oo keliya ayaa ah boqolkiiba yar, marka haddii aad buurta deynta ka dhigto mid kugu filan, saamaynta qiima dhimistu waxay u muuqataa inay hoos udhaceyso marka loo eego boqolleyda. Baananka dhexe sidaas awgeed waxay u muuqdaan inay rumaystaan ​​in sare ay sameeyaan buurta, saamaynta ugu yar ee qiimeyn ahaan boqolkiiba.
Taasi waa waxa aan hadda ku aragno Mareykanka, taasina waa tan aan Yurub ku aragno. Buurta deynta ayaa si weyn loosoosaaray. Si kastaba ha noqotee, dhammaan khubarada dhaqaale ee adduunka oo dhami waxay isku raacsan yihiin in qiimo-dhimis lacageed weyn uu soo jiitamayo.
Is barbar dhig taas oo lacagta qalinka ah. Lacagtaas dahabiga ah ee aad heshay isbuucii la soo dhaafay markii aad iibisay boorso baradho ah waa qiimahoodu ugu badan toddobaadkan, maxaa yeelay dahabka si dhakhso ah looma yareyn karo. Si kastaba ha noqotee, euro ku jirta koontadaada bangiga ayaa si dhakhso leh u lumaysa qiimaha sababtoo ah lacag aad u badan ayaa si dhakhso leh loo daabacay si qiimuhu si dhakhso ah u dhacayo
Bitcoin waa heerka dahabka cusub
Abuuraha qarsoon ee bitcoin wuxuu la yimid xal aad u caqli badan kaas oo lagu xasuusto dahabka macdanta.
Waa inaan waxoogaa yara shaki galno lacagta noocan oo kale ah, sababtoo ah waxay bixisaa suurtogalnimada in macaamil kastaa laga raadin karo. Sidoo kale xaqiiqda ah in Microsoft sanadka 2019 patent 2020-060606 xareysay waa calaamad muujinaysa in cryptocurrency lagu xiriirin karo 'internetka waxyaabaha'; taas oo annaga qudheennu aan ku noqon karno mid ka mid ah 'waxyaabaha'.
Hadana waxaan ku jirnaa xilligii lagu raadsan lahaa lacagta dijitaalka ah. Ka dib oo dhan, waa lacag aad ku heli karto adoo adeegsanaya barnaamijkaaga ama kaarka bangiga. Baabi'inta lacagta soo socota ee waraaqaha, sidaa darteed waxaan ku jirnaa hore barta internetka raadinta dhijitaalka ku jirta. Dhibaatada dheeriga ah ee ku jirta lacagtaas, xilligan xaadirka ah, waxay sidoo kale si aad ah u qiimeyneysaa si dhakhso leh.
Satoshi Nakamoto waa erayga qof aan la garaneyn ama koox aqoon u leh cryptocurrency Bitcoin oo aasaastay xogta ugu horreysa ee blockchain. Waxaa laga yaabaa inaan la yaabno haddii burburka nidaamka maaliyadeed ee hadda jira uusan ahayn mid si fudud loogu qorsheeyay inuu noogu kaxeeyo dhinaca bitcoin heer cusub. Taas waxaa laga yaabaa inaad la yaabi karto haddii Satoshi Nakamoto uusan ka ahayn isla koox awood sheegashada leh.
Si kastaba ha noqotee, nidaamka bitcoin si caqli leh ayaa looraysan yahay runtiina waxay ku saleysan tahay mabda'a macdanta dahabiga ah. Si loo suuqgeeyo xaddi bitcoin, bitcoins waa in la qodaa. Taasi suurtagal ma ahan iyada oo la adeegsanayo spatulas iyo majarafadaha dhulka ku jira, sida dahabka, laakiin taas oo leh kumbuyuutarro badan oo dhakhso leh oo leh qiime iibsi aad u sarreeya isla markaana shidaal badan ku liitaa (awood). Tani waxay hubineysaa in qof walba uusan soo saari karin bitcoins.
Habka soo saarista bitcoins waxaa loo yaqaan 'macdan qodista', oo runtii ah mid laga xasuusto dahab ka qodista miinada. Hawshan macdan qodista micnaheedu waa in kumbuyuutarradu ay xalliyaan qaacido xisaabeed oo aad u adag oo ay qaadan karto maalmo in la helo xalka. Si kastaba ha noqotee, kakanaanta qaaciddada ayaa sii kordheysa maadaama ay kumbuyuutarro badan ku jiraan shabakadda. Markii ay sii badato dadka bilaabaya macdanta, way sii adkaaneysaa in xisaabinta xalka.
Waqti kasta oo kumbuyuutarka noocan oo kale ahi uu xalliyo qaaciddada, 1 bitcoin ayaa la sameeyaa. Sidaad ugu mahadsantahay xisaabintan, macdan qodaha wuxuu helayaa qayb ka mid ah bitcoin abaalmarin ahaan.
Si loo sii adkeeyo ciyaarta, abaalmarinta ayaa la goynayaa kalabar afar sano kasta. Kala goyntaas ayaa si nasiib ah toddobaadkan u dhacday. 12-ka May waa sax. Markaa haddii aad ku guuleysatay inaad wax ka hesho 12 bitcoin kahor May 1, waxaad heshay x% taas. Wixii ka dambeeyay Maajo 12, qadarkaas waa la gooyaa kalabar. Tan macnaheedu waa in qaar ka mid ah macdan-qodistayaashu aysan iibsan karin "spatulas" iyo "majarafado" cusub oo ay ku qabtaan shaqadooda qodista. Ma bixin karaan biilasha korontada ama kuma iibsan karaan kombuyutarada ugu dhakhsaha badan aniga. Way ka soo dhacaan.
Haddii aad sidaa u maqashid, isla markiiba waxaad ka fikiri kartaa: Taasi waxay kuu horseedaa keli keli talisnimo. Taasi waxay la micno tahay in shirkadaha hodanka ah ay mar kale noqonayaan kuwa wax soo saara macdanta sidaas darteedna waxaad dhowaan heleysaan meel udub dhexaad ah halkaas oo wax qodista macdanta oo dhami ka dhacaan Sheekada ayaa ah, si kastaba ha noqotee, iyada oo ay lumiyeen tiro kombiyuutarro shabakadda ah, qaaciddada xisaabinta ayaa waliba si isdaba joog ah hoos ugu dhacaysa. Tani waxay sidoo kale kicineysaa macdan-qodayaasha cusub inay soo qaadaan spatulas-ka isla markaana ay bilaabaan majarafadaha.
Si kastaba ha noqotee waad jeedsataa ama leexisaa, waxaad sidoo kale arki doontaa koror ku yimid halkan oo waxaa jira halis.
Si kastaba ha noqotee, maal-gashadeyaal aad u tiro badan ayaa xiiseynaya mabda'a hawlgalka bitcoin, si sax ah sababtoo ah hanaankan macdan qodista. Ka dib oo dhan, waa wax laga xasuusto kakanaanta adag ee aad ka soo saarto dahabka dhulka sidaa daraadeed waxay u dhigantaa lacagihii dahabiga ahaa ee waayihii la soo dhaafay iyo hubaalnimada laxiriirta 'bareega dulsaarka'. Taasi waa sababta aad u aragto in hadda ay jiraan dhowr boqol oo balaayiin ah oo ku saabsan ganacsiga bitcoin.
Markaa Bitcoin waxay leedahay awood ay ku samaysato heerka dahabka cusub. Waxay u muuqan kartaa, sidii ay u bixin laheyd, jabaqdaas ku saabsan qiimo dhaca lacageed ee aan ka haysan nidaamka nadaafadda hadda jira.
Kuxiro lacagaha isweydaarsiga bitcoin
Baaqa dimoqraadiyada tooska ah shalay ayaa la daabacay, Waxaan ka hadlay isku xidhka lacagta bitcoin sida “heerka dahabiga ah”. Waxaad dhihi kartaa waa in lacagta lagu xiraa shay. Waxaad sidoo kale dib ugu laaban kartaa dahabka jireed ee caadiga ah sidii caadiga ahayd, laakiin markaa waa inaad ku sii qoddaa dahabka dhulka oo taasi runtii jawiga ma ahan jawi saaxiibtinimo. Kombuyuutarrada quwadda-gaajaysan sidoo kale uma fiicna deegaanka, laakiin waxaan aragnaa tikniyoolajiyad aad u badan oo soo ifbaxda, taas oo dhalinaysa koronto badan bey'addana sidaas darteed waxaad dhihi kartaa doorbidistu waa 'bitcoin' heerka 'dahabka'.
Way iska cadahay inay jiri doonaan nooc "heerka dahabka" mar labaad. Haddii kale waxaan wajahaynaa hoos u dhac qiimo lacageed. Taasi waa sida saxda ah ee dhacaya inta lagu guda jiro qalalaasaha corona. Dib-u-qaabaynta heerka dahabka cusub waa in ay la socdaan dib-u-dejinta ee Ahraamta awoodda. Meesha hadda xariiqda kor u kacdo oo awood dheeri ah ay ku socoto koox yar oo ka caafimaad badan, awoodda ayaa ah inay gasho gacmaha dadka.
Ku soo noqoshada awoodda dadka dabcan waa dhacdo taariikhi ah. Taasi waligeed kuma dhicin taariikhda. Hadana isla teknoolojiyad la mid ah kan bitcoin ku saleysan, oo ah tan 'blockchain', ayaa waxay dadka siisaa fursad ay dadka ku siiso awooda go'aan qaadashada tooska ah. Khasab kuguma aha inaad buuxiso guud ahaan qaab dhismeedka bulshada, laakiin waa inaad beddeshaa maamulka.
Tusaale ahaan, waad lahaan kartaa wasaarado ay hogaamiyaan wasiiro dad magacaabay oo dadka u soo warbixiya. Halkii ay dhaar ku dhaaran lahaayeen taajkii, waxay hadda dhaar ugu dhaartaan dadka. Tani waxay sidoo kale khusaysaa dhammaan howlaha madaniga ah iyo dhammaan xirfadaha hadda dhaarta u hiilinaya carshiga (garsoorayaasha, qareennada, booliska, kormeerayaasha, xoojiyayaasha, iwm.).
Dabcan ma soo sheegi kartid wax kasta oo aad dadka u soo bandhigi karto, markaa tallaabo fududaynta ayaa la qaadayaa. Su’aashu waxay tahay in dadwaynuhu ay ku dhiirran karaan kacaanka noocan ah ama in aynu markale sugi doonno ilaa ay naga qanciyaan mid ka mid ah bilyaneerada sida Elon Musk iyo Bill Gates, halkaas oo aan ku wadno halista ah in xiriiriyaha lala xiriiriyo blockchain uu weheli doono ku xidha maskaxdayada nidaamkaas ama ku xidho nidaam noocan oo kale ah shahaadada tallaalka.
Haddii ay jirto fursad ay ku bilaabi karto isbedelka, hadda waa. Waa inaannaan ka lumin fursaddaas. Si kastaba ha noqotee, taas awgeed waxaan u baahan nahay inaan dhaqaaqno.
Haddii aan rabno isbedel waxaan sameyn karnaa labo shay. Ama waxaan sugeynaa ilaa dhibaatada lacagta fiatku ay aad u weyn tahay isla markaana sicir bararku aad u adag yahay isla markaana awood isku mid ah ay ina siinayso "heerka dahabka" cusub ee xalka. Ama annaga ayaa mas'uul iska ah.
Ma waxaan sugeynaa sicir bararku inuu aad u sarreeyo oo uu inaga sii mid noqdo webka kontaroollada guud ee awoodda ah ee loo yaqaan 'pyramid power' in aysan jirin dib loo laabto? Markaa waxaan leennahay dammaanad maamul xukun farsamo. Taasi micnaheedu waa, waxaan ku xirnaan doonaa si walba qaab nidaam u adeegsada tikniyoolajiyadda si nalooga dhigo addoomo dijital ah.
Haddii aan dooratay inaan la wareegno dib-u-cusboonaysiinta lafteena, waxaan ku dhejin karnaa biryaha waxaanan ka faa'iidaysan karnaa waxtarka faa'iidooyinka horumarka farsamada. Markaa waxaan ku dhejin karnaa jaranjarada horumarka xorta ah ee AI waxaanan ku dhejin karnaa biriiga awooda dhexe.
Su’aashu waxay tahay, haddaba, haddii fursadda hadda jirta ay ku filan tahay inay kugu dhiirrigeliso. Su’aashu waxay tahay fursadda iftiinku waa ku filan in lagu dhiirrigeliyo boqolaal kun oo waddan kale ah.
Taasi waa meesha cilmi-nafsiga aadanaha uu ku ciyaaro, waana meesha ay caqabadda ku imaan karto isbeddel dhab ah oo ku dhaca maskaxda dad badan. Si kasta oo ay tahay, waxaan rabaa inaan awoodo inaan nafteyda ku fiiriyo muraayadda oo aan ogaano inaan intii karaankeyga ah qabtay. Fursada ayaa jirta, fursadaha ayaa jira. Kaliya waa inaan soo qaadanaa oo aan qabanaa. Uma baahna turubka iyo kubadaha. Kaliya waxay ku qaadataa kacaan maskaxdaada.
Nidaamka codeynta tooska ah ee tooska ah, waxaan ku rakibi karnaa hogaamiyayaal cusub oo dadka soo wariya, sharci u dejista oo ka sahlan, baabi'iya nidaamka lacagta fiat-ka isla markaana ku xira lacag cusub illaa bitcoin. Waxaan u eryi karnaa mid aan loo adeegsan karin ama waxaan ku dhufan karnaa oo aan u oggolaanaa codsigu inuu fayras noqdo. Ma ku jirtaa
Fiidiyowga Dr. Plandemic Judy Mikovits waa dhacdo dhacdo 201 ah oo ah been abuur wararka been abuur ah (fiidiyo ah)
Weerar culus oo lagu qaaday bogga internetka ee Martin Vrijland, laakiin waan sii wadi doonnaa!
Tags: Seeraar, dhibaatada Corona, dollar, euro, featured, fiat, geld, nidaamka lacagta, heerka caadiga ah ee dahabka, kala badh, SU, sicir barar, saliid, qiimo dhimis, OPEC, dib u bilow, kacaanka, Satoshi Nakamoto, caddeynta tallaalka
13 May 2020 ee 11: 31
Halkan ka soo hel sababta qaanuunka qoditaanka bitcoin uu ugu noqonayo mid adag:
Benzo Wakker ayaa qoray:
13 May 2020 ee 12: 14
Codsigu wuu saxeexay, waana wax aad u xun, waxaa jira dad aad u tiro yar oo sidan sameeyay.
13 May 2020 ee 13: 46
Waxay ku soo baxday ficil ahaan inay dadku jecel yihiin inay dacwoodaan oo ay jeclaadaan inay maqlaan waxa qaldan, laakiin iyagu ma doonayaan inay sameeyaan dadaal ay ku bilaabayaan isbedelka. Ku socoshada goobaha codbixinta afartii sanaba mar oo xarriiq la'aantu waa mid xiiso leh oo kugu filan, iskaba daa in aad naftaada ku dadaasho sidii aad wax u qaban lahayd - inkasta oo ay taasi jirto, taasi kama badna saxiixitaanka codsi si ay dhaqdhaqaaq u socdaan.
Marka dadku ma aaminsana isbeddelka waxayna sida muuqata door bidaan inay u daayaan. Badanaa dadka dhaha inay soo jeedaan waxba kuma qabtaan ficil ahaan.
Laga soo bilaabo 'boorsada gacanta oo gacanta ku jirta' ilaa DWDD, ilaa 'shandad gacanta lagu hayo' oo la eegayo Jensen ayaa ah isbedelka kaliya ee la arki karo
13 May 2020 ee 14: 17
Hagaag, cynical laga yaabee ama waaqica ah qeybteyda. Waxba kama filanayo adoomaha. Xaqiiqdii iyagu ma doonayaan isbedel kaliya lacag intaas ka badan. Addoomayaashu waxay ku fiican yihiin addoonka. Sidee nabadi ku dhacday markii adoomayaashu aysan wadada u qaadin iyagoo ka baqaya 'corona'. Waxaas oo dhan ayaan u xiisay hadda, laakiin iyadu dan kama gasho anshaxa iyo waxa saxda ah. Madurodam ma ahan dalka isbedelka iyo kacdoonnada. Taasi waa dabeecada addoonsiga iyo fikirka ganacsatada halkan.
Addoonku wali waa hagaagsan yihiin, ugu yaraan faa'iidooyinka lahaanshaha adoonsiga ayaa ka badan faa'iido darrooyinka. Sidookale, ha iloobin kalimadaada iyo hurdo la'aanta addoomaha.
Martin, waxaad tahay geesi, waxaad isku daydaa sida ugu fiican oo aad u soo jiidato faras dhintay ..
13 May 2020 ee 15: 30
Khibradeyda ayaa ah in jimicsi dheeri ah ay ku jiraan boorso baradho ah.
13 May 2020 ee 15: 40
Baradhadu waxay leeyihiin dabeecad wanaagsan oo ay dabiici ahaan u soo baxaan. Haddii aad dhigto boorsadaas baradho dhulka, waxaad haysataa gaari buuxa oo baradho ah toddobaadyo yar gudahood. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaad ka fiicnaato jawaan baradho ah. Faras dhintay waa sheeko ka duwan 😉
13 May 2020 ee 15: 54
sida saxda ah ujeedkeyga, sharafta waxba kuma khaldanaan…
13 May 2020 ee 16: 12
Faras dhintay waa sheeko kale. Cafis haddii aan si xun u dhaqmo.
13 May 2020 ee 17: 18
Si buuxda loo fahmi karo. Waad ku mahadsan tahay mahadsanid habkaaga.
Waa inaan qirtaa inaan si aad ah uga careysanahay daahfurka in dhaqdhaqaaq yarida aadanaha ka dhex jiro, laakiin si kastaba ha noqotee waxaan kusii soconayaa rajada ah inay jiri doonto bar tilmaameed.
Waxaan si gaar ah ula yaabanahay inaysan dadku xitaa ku dhibaynin inay buuxiyaan codsi isla markaana ay riixaan batoonka. Runtii taasi waa 30 ilbiriqsi oo keliya oo shaqada ah. Gaalnimo ma cabsi baa mise waa cabsi aad u weyn? Xitaa kumanaan kun oo ka mid ah kuwa raacsan maalintii? Mise runtii waa uun shukulaato iyo madadaalo biir.
13 May 2020 ee 17: 28
In yar ayaa fahamsan saameynta xaaladda hadda jirta. Markaan arko isku xirnaanta iyo cawaaqibta ficilada qaarkood weli waxay u baahan tahay EQ / IQ mana ka hadlayo kama hadlayo oo keliya addoommada laqiimeeyey ee leh 'cinwaan' magaca hortiisa.
Sidaa darteed aragtida Helicopter-ka waa shuruud, iska fogeynta miinooyinka ma fududa. Marka kama hadlayo kahadalka jirka 😉
13 May 2020 ee 17: 56
Waxaan u maleynayaa in dad badani aysan dooneynin inay sheegaan magacooda iyo faahfaahintooda. Ka cabsi qaba loo shaqeeyaha, 'shaqada', adeegga amniga AIVD iwm. Nasiib wanaag waxaan ku nool nahay dowlad dastuuri ah. Qufac. Halyeeyada sharaabaadyada. Ka dib oo dhan, waa inaysan jirin wax khatar ah oo loo qabo addoomaha. Bal qiyaas.
13 May 2020 ee 18: 00
Mar waxaan lahaa “saaxiib” (is yaqaan) oo shaqo la'aan ku ahaa guriga muddo sannado ah. Waxay ku takhasustay. Takhasuska dhinaca: iskuxirka iyo shaandheynta xogta keydka macluumaadka.
Waqti qaar ayuu ku noqday inuu shaqada ku laabto ka dib koorso tababar ah.
Sharaxaada profaili: naag iyo caruur la'aan haysata guri iib ah.
Markii aan weydiiyay bal inay sifiican - dhammaan aqoonta uu u leeyahay oo ah sida ay dowladuhu u basaasaan dadka - inay u degto xero ku taal buurta halkii ay ka qaban lahayd shaqo gacan ka geysaneysa dhismaha Nidaamka walaalkiis weyn (falanqaynta xogta weyn), ayaa jawaabtiisu ahayd: “Way fiicantahay in aan iska beddeli karo gudaha. Aniguna waan ku dhawaaday gurigayga. Hadda waxaan ku noolaan karaa oo aan sii wadan karaa gaadhigayga ”.
Isbedelkaas ka yimid gudaha wali muu muuqan 😉
Aaway geesiyaasha? Waxay ku sugan yihiin guryahooda waxayna sii wadi karaan inay wadaan gaarigooda.
13 May 2020 ee 18: 23
Miyaanay taasi ahayn tusaale fiican oo ah qof aragti gaaban oo aan garaneynin inuu dhisayo baararka xabsiga uu naftiisa ugu xirmayo si qotodheer?
13 May 2020 ee 15: 41
Meesha Jarmalka iyo Faransiiska ayuu Kampfgeistku weli xoogaa nool yahay, Madurodam macno ahaan iyo muuqaal ahaan waa joogto ah. Ereyga 'Resistance' qofku wuxuu u maleeyaa mid ka weecasho ..
13 May 2020 ee 15: 44
Xiro maaskaro haddii aad dibadda u baxdo 😷
13 May 2020 ee 15: 42
Xumbo-dillaacyada ayaa qarxi doona, xasillooniguna wuu daba socon doonaa
mec ayaa qoray:
13 May 2020 ee 17: 48
Wixii haraaga ah ee ku habsaday adduunka ee awoodda innagu leh wuxuu leeyahay dhibaato weyn haddii aad tuurto taleefankaaga casriga ah ama aad joojiso adeegsiga waxaas, waxay luminayaan gacantooda NWO. La'aanti taleefankaaga jeebka ee shit-ass, iyagu mar dambe ma awoodi doonaan inay ku kormeeraan 24/7 oo lacagtooda xumbada dhijitaalka ah waxay halis ugu jirtaa halka ay ku riixayaan qof walba.
Marka jooji dabeecadda balwadda ee balwaddaada casriga ah
14 May 2020 ee 08: 00
Aniga ahaan, taleefanka kama goyn doono dibadda
13 May 2020 ee 18: 10
Qeyb ka mid ah taageerada corona waxay ku hanjabtay in dib loo bixin doono: 'Khalad weyn'
Hagaag waxaan u malaynayaa in tani khalad weyn ahayn, laakiin waxay ku habboontahay ajandaha bilderberg in la baabi'iyo fasalka dhexe oo dhan oo loo gacan geliyo dawladda, sidaa darteedna kuwa badan oo mitarbeiters ah.
Laga soo bilaabo 33:10 Rutte: “Waxaan rumeysanahay dowlad xoog leh. Dalkani wuxuu u baahan yahay dowlad xoog leh. ” 34:23 "Waxaan nahay waddan si hoose ugu xeel dheer hantiwadaagnimo."
tuhunka caadiga ah Stiglitz waxaa laga soo qaadaa xasilloonida si loo sharxo dhawr arrimood, sidaa darteedna dowlad-dhexe. Socialism waa albaabka loo maro (teknolojiyad ahaan) wadajirka.
26 May 2020 ee 14: 18
13 May 2020 ee 23: 57
sida loo bilaabo dhaqdhaqaaq https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 May 2020 ee 11: 56
Si dhakhso badan ayey u socotaa. Tusaalaha cusub ee Mac. Marka lagu daro waxa ay tahay inaad sameyso, waxa ay tahay inaad taabato si aad u dalbato (qof walba aqriso wuxuu ku jiraa gacmahooda calaamadaas amarka, qaladka), tixgeli qosolka iyo halka aad joogto, iyo sida aad u dhaqanto. Astaamaha aragtida iyo wada qabsiga ee hal il kaliya. Waa maxay hal il, il akhri AI. Dabcan isu ekaysiiyay sidii yeer oo kale.
« Waqtiga isbedelka weyn iyo wareegga weyn: saxeex codsiga
Miyaad qaadan kartaa ama diidi kartaa tallaalka Covid-19 haddii ay qasab noqoto? Maxaa la sameeyaa? »
Wadarta booqashooyinka: 2.472.795
SandinG op Miyay adkaanta Trump ee Shiinaha ku wajahan bilowga dhicitaanka doolarka iyo burburka dhaqaalaha?